Saafi Films - News: War Deg Deg Ah Ciidamada Huwanta ah oo Caawa ku hoyana iridka laga Galo Walaweyn iyo Al-Shababa oo ka baxday
War Deg Deg Ah Ciidamada Huwanta ah oo Caawa ku hoyana iridka laga Galo Walaweyn iyo Al-Shababa oo ka baxday
Wararka Caawa aan ka heleyno Degmada Walaweyn ee Gobolka Sh/Hoose ayaa shyeegaya in Caawa Degmadaasi ay tahay mid aan ka jirin wax maamul ah haba yaraatee ,waxaan halkaasi ka baxay Ciidamadii Al-Shabaab ee horey u heestay Degmadaasi.
Dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Hogaamiyaashooda ayaana maanta gabi ahaan ka baxay Degmada Walaweyn kadib markii ay halkaasi ku dhawaadeen Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo is garabsanaya.
Ciidamada Huwanta ah ayaana Caawa ku hoyana halka laga galo Degmada Walaweyn gaar ahaan koontaroolka Degmadaasi ,mana jirana Ciidamo katirsan Huwanta oo ilaa wali gudaha u galay Degmadaasi sida Goob jooge ku sugan Degmadaasi uu goordhaw sheegay.
Goobaha ganacsi ayaa gabi ahaan caawa ah mid xiran Shacabka ku dhaqan Walaweyn ayaana caawa ah kuwa Bandow iskood ah isa saaray waxa ayna ku xaroodeen guryahooda sida goob joog ah noo sheegay.
Ciidamada Huwanta ah ayaa la filayaa in Maalinta berito ah ay si rasmi ah gudaha ugu galaan Degmadaasi , Wax ayna Noqoneysa hadii ay Walaweyn Qabsadaan Ciidamada Huwanta ah Degmadii 4-aad oo katirsan Sh/Hoose ay la wareegaan Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM.
4,577,172 unique visits